Umdwebo owenziwe emzimbeni, ongagqoka isikhathi esifushane - ubizwa ngokuthi i-tattoo yesikhashana. Ukuphikelela komdwebo onjalo kungahluka emahoreni ambalwa kuya ezinyangeni eziningana.
Uma ulokhu ucabanga ngokuhlobisa umzimba wakho nge-tattoo yangempela, i-tattoo yesikhashana yithuba elihle lokuziqonda ukuthi ngabe udinga ukuqhubeka kuze kube phakade umdwebo noma uphawu emzimbeni wakho futhi ungalokothi uzizisole. Ukudwetshwa kwesikhashana kwesikhashana kunciphisa isitayela sakho nesithombe sakho, ngoba namuhla ungathola umklamo we-flirty ehlombe lakho, nangomuso nge-bracelet "evulekile" evulekile ekhanda lakho.
Indlela elula futhi elula yokuzitholela i-tattoo yesikhashana ukukwenza lokhu ngepeni noma umaka nge-stem encane. Noma kunjalo, ngenxa yokuqukethwe kwamakhemikhali ahlukahlukene kuwo, umdwebo onjalo odwetshiwe ungabangela ukungezwani noma ukucasula esikhumbeni. Yebo, futhi ubambe isithombe esinjalo - nje isikhathi esifushane kusuka emahoreni ambalwa kuya ezinsukwini ezimbili. Ukuthandwa okukhulu kusanda kutholakala i-aeratat. Lezi tattoos zisetshenziselwa ngokushesha futhi zingenabuhlungu, azilimazi ngokuphelele futhi azibangeli ukusabela kokugula. Ukusetshenziswa kwe-aerateut kwenzeka ngosizo lwe-airbrush, nge-stencil, nakuba amakhosi amaningi angenza ngaphandle kwabo. Le pateni ifana kakhulu ne-tattoo yangempela, futhi ingaba yinkimbinkimbi emnyama noma enemibala eminingi, kuye ngokuthi izifiso zomklayenti. I-aerotat, eyenziwe ngamapayipi akhethekile, ingakhanyisa ngokuphumelelayo ku-nightclub noma kwi-discotheque, ngenxa yokuthola i-ultraviolet. I-tattoo enjalo ihlala emavikini amabili. Ama-Tattoos ahunyushwe, ama-tattoo stickers yindlela efinyeleleka kakhulu futhi elula yokuhlobisa umzimba wakho ngephethini enhle. Ukuthengwa kwe-tattoo eyenziwe ngomumo kungathengwa esitolo esikhethekile futhi kusetshenziswe kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Kubonakala sengathi i-tattoo evamile, ngaphandle kokuthi ungayilahla nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuthwala kahle, i-tattoo enjalo ingakwazi ukugcina isonto elilodwa. Ukuhumusha ama-tattoos kuyithuba elihle lokuma futhi ushintshe isitayela sakho. Olunye uhlobo lwe tattoo lesikhashana luyi-biotate. Ama-tattoos anjalo asetshenziswa ngendlela yamaphetheni, i-glitter kanye namaphoyinti ngosizo lwe-glue, engenakulimaza ngokuphelele esikhumbeni. Lezi zithombe zihlala isikhathi esifushane, zivunguza ngokushesha, futhi upende lusulwa. Olunye uhlobo oluthandwayo lwe-tattoo yesikhashana luthi "umdwebo wesimiso". I-tattoo enjalo eyenziwe ne-henna ibheka kakhulu i-sexy, imfashini futhi iyimfihlakalo. Inqubo yokusebenzisa "i-menti tatu" ayinabuhlungu kuphela, kodwa futhi iyamnandi. Abaningi bomhlaba abahloniphekile sebeye bakwazi ukuqonda konke okujabulisayo kwalezi zithombe - Madonna, Naomi Campbell, Liv Tyler, Demi Moore nabanye abaningi bakhetha "Mendi tattoo". I-Henna iyinhlangano yemifino futhi ayibangeli ukucasula. Ukuhlukumeza okuphela kwalezi zithombe ukuthi ukudweba okusetshenziselwa isikhumba kusakazeka kancane, ngakho ngeke kwenzeke ukudala ama-shades ahlukene kanye nokushintsha kombala.
Mayelana nendlela yokwenza i-tattoo yesikhashana ekhaya ne-henna, sizochaza ngezansi. Okokuqala, udinga i-henna. Sicela uqaphele ukuthi i-henna, okuhloswe ngayo imibala yezinwele, ayifanele ukudweba imibala, ingumhlabathi omuhle futhi ingaqukatha usawoti wamaminerali. Bheka i-henna e-phyto-pharmacy noma ezitolo ezikhethekile zezimonyo ze-herbal. I-Henna ye "menti tattoos" kulula ukuyithenga kuma-bazaars aseNdiya nase-Afrika, lapho umdwebo onjalo uthandwa kakhulu. E-India, ungathenga ngisho nezibhakabhaka ezenziwe ngomumo nge-henna, imibala ehlukahlukene - ushokoledi omnyama, i-burgundy, ophuzi, omnyama, obomvu, obomvu. I-henna enhle yama-tattoos inganqunywa umthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka futhi ngokugaya kahle kakhulu. Gcina le powder endaweni eyomile nelomnyama. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa izidakamizwa zesikhashana ekhaya, unciphisa isikhumba ngesepha noma utshwala. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukususa izinwele ezivela endaweni yesikhumba ukuze zidwetshwe, njengoba izinwele zokukhanya zingaba mnyama ngemva kokuvezwa kwe-henna. Ilungiselela i-pasta evela ku-henna kanje: emanzini abilayo ukugcwalisa izinkezo ezimbalwa zekhofi noma itiye bese upheka ingxube ekushiseni okuphansi isikhathi. I-Henna kumele ihlungiwe ngesihlungo esihle futhi ivuselele njalo itiye eliphuzayo noma ikhofi ephuza kuyo. Ukuze uqiniseke ukuthi ingxube ayigcini futhi iba ne-viscous kakhulu, ushukela ungeziwe engxenyeni. Ukuze uthole umbala omnyama we-tattoo, ungangeza inani elincane le-basma powder, kodwa kungcono ukungasebenzisi amanye ama-dyes, njengoba kungaziwa ukuthi bangathinta kanjani umbala we tattoo nesimo sesikhumba. Engeza ama-tablespoons ambalwa wejusi lemonti noma i-lame. Ukungaguquguquki kwenhlanganisela kumele kube mnandi, njengamazinyo. Ukunamathiswa okumele kubonwe kufanele kuhlile amahora angu-3, ​​engeza ukwehla kwamanye amafutha abalulekile futhi uqhubeke nokusebenza ngokuqondile kwephethini le-henna.
Faka isicelo ngomdwebo we-pencil owenziwe kahle noma usebenzise i-stencil eyenziwe ngomumo. Emikhawulweni yephethini noma i-stencil shayela, sebenzisa ukunamathiswa okulungiselelwe kusuka ku-henna. I-layer eyinqamule yayo, ishaya isithombe esibi kakhulu. Ngemuva kokungu-1, amahora angu-5-2, lapho unamathisela ubomile, ususe ngokucophelela ngesikhala. Dry tattoo cishe ihora ekamelweni elifudumele, ngezikhathi ezithile ukunyusa ngamanzi kalamula nge-added sugar. Emva kwalokho, kunconywa ukuthi usule i-tattoo eqediwe ngamafutha e-eucalyptus. Ukugeza, ukugeza akuthinti izinga lokuqina kwe-tattoo, kodwa ezinsukwini zokuqala emva kokusebenza kwalo, zama ukugeza emanzini okugezela, kodwa nje uhlanza amanzi. Ubamba "umdwebo wamagama" kusuka emasontweni angu-1 ukuya kwangu-2. Ochwepheshe abaphakamisi ukudweba imidwebo ye-henna emzimbeni owodwa kaningi kaningi kunye njalo ezinyangeni ezimbili. Ungasebenzisa i-henna kunoma iyiphi ingxenye yomzimba, ngaphandle kwendawo ebusweni. Ngale ndlela elula ngosizo lwe-henna ungenza tattoo yesikhashana ekhaya, ufaka emfanekisweni wakho ohlukile kanye nemfihlakalo. Uma ufuna ukwenza i-henna tattoo enhle kakhulu, eyinkimbinkimbi ye-tattoo, thintana nabaqeqeshi abazokusiza ukuba ube umnikazi wesithombe "esitokisini sezintambo" esinezintandokazi nakakhulu.
Uthuli ekuvikelweni komuntu nothuli
Indlela yokudweba ubuningi ekhaya
Indlela yokuzilungisa wena efulethini?
Izindlela zamakhemikhali asekhaya kanye nomphumela wazo emzimbeni womuntu
Ukunakekelwa okufanele endlini yokugezela
Ulwazi olujwayelekile mayelana ne-physalis, kanye nezincomo zokukhula nokunakekelwa
Indlela yokunciphisa ngokushesha ukucindezela ekhaya
I-omelette ene-shrimps ne-avocado
I-Cottage ushizi casserole nge-peaches kanye ne-spaghetti
I-Stew ngezinkukhu zengulube
I-Pea isobho neminqumo
I-casserole yabhontshisi ebhakabhaka
Isaladi esiphundu kunawo wonke nama-squid - zokupheka ngezithombe ezinyathelo ngezinyathelo
Yini okufanele ngiyithathe nami esibhedlela?
Abahlanganyeli abadume kakhulu beNdlu-2
Indlela yokukala ukushisa okuyisisekelo kokukhulelwa
Indlela yokuthuthukisa i-gait enhle